Ukubuyekezwa kwezigaba ezahlukahlukene zezinkondlo zikaBlas de Otero | Izincwadi Zamanje
I-Blas de Otero kuqala ngezinkondlo okukhona, okukhonjiswa ezincwadini ezimbili ezaziwa kabanzi njenge "Ingelosi enobudlova bomuntu" kanye "noRedoble de unembeza", okwathi ngokuhlangana kamuva kwaveza ivolumu enesihloko esithi "Ancia", igama eliphumela ekujoyineni igama lokuqala lesihloko sokuqala kanye okokugcina kwesibili.
Kulezi zincwadi imbongi ikhombisa ngezwi layo i-lyric usizi nomunyu wawo wonke umuntu obhekene nokufa, okwandiswa ngokungabi bikho kwezimpendulo ezivela kuNkulunkulu ongayiphenduli imibuzo ebuziwe nangendlela ehlose ngayo ukunciphisa usizi esesikhulume ngalo ngaphambili nokuthola ukuthula, into amadoda agwetshelwe ukuyilangazelela kodwa angayitholi ngenxa yendlela engenakulinganiswa eya ekufeni.
Isigaba saso sesibili sihambisana nezinkondlo social futhi ngaphakathi kwayo sithola ezinye iziqu ezaziwayo ezifana nokuthi "Ngicela ukuthula negama" phakathi kwezinye. Isihloko salo msebenzi sisinikeza umbono walokho okufunwayo okwamanje, amagama okumemezela ukungabi nabulungisa nokuthula, into engekho ezweni futhi imbongi ekholelwa ukuthi iyadingeka ukuze sikwazi ukuhlala endaweni indlela ehloniphekile.
Ekugcineni, eminyakeni yakhe yokugcina uBlas de Otero uzinikezela enkondlweni yomlingiswa okucabangayo lapho ahlola khona umsebenzi wakhe futhi lapho ehlaziya khona ezinye izici zomlando wakhe.
Imininingwane engaphezulu - Umlando kaBlas de Otero
Isithombe - Alberto Cereda
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Izigaba ezinkondlweni zikaBlas de Otero